Intengiso yasimahla yeZindlu kunye neNtengiso yePropathi eHlawulwayo. Eyona nto isetyenziswayo
EyeKhala 06, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Ukuthengisa ipropathi yakho ngokukhawuleza, kwaye kwangaxeshanye ngexabiso elifanelekileyo, ke umcimbi wokuthengisa kufuneka uqwalaselwe, kwaye ungasishiyi esi sigqibo “ngenceba yekamva.” Sele wenze okuninzi: uzise ipropathi yakho ngolandelelana, ulichaze ngokucacileyo ixabiso, ubhale isibhengezo sentengiso malunga nokuthengiswa kwezindlu… Wenza ntoni olandelayo? Kulungile - intengiso yokuthengisa izindlu nomhlaba! Emva kwayo yonke loo nto, kuba ufuna ukuthengisa iipropathi ngaphandle kokuncediswa ngumthengisi, kuya kufuneka uqhubeke nawo wonke umsebenzi wakhe.
Ke, siza kwenza ntoni? Ukuya kwindawo ephakathi enophawu esifubeni sethu, "Thenga ipropathi epholileyo" ngokuqinisekileyo asiyi ndawo. Kwaye ayisiyonto ngenxa yokuba ayibonakali "-le ndlela ayisebenzi. Nazi ezinye iindlela zokhetho olusebenzayo, olusebenzayo noluqinisekisiweyo lokugcwaliswa kwentengiso. Le nto inikezelwe kule nqaku.
Eyokuqala: "ukuba ungaya phi, kufuneka wenze ntoni ..."
Ke, ungaziposela nini iintengiso zeearhente zepropathi? Ingcinga yokuqala efika engqondweni ziintengiso eziprintiweyo kumajelo oshicilelo nakupapasho. Oku kunokubandakanya: amaphephandaba, iimagazini njalo njalo. Kwangelo xesha, kubaluleke kakhulu: inkampani ephethe intengiso oyikhethayo-nokuba iya kuba yeyona magazini iyabiza kakhulu, okanye iya kwanela ukubeka intengiso kwiphepha-ndaba lokuthengisa kudidi lwezoqoqosho. Ke:
Ukuba sithetha ngendleko eziphantsi zepropathi, kunokwenzeka ukuba ubeke intengiso yendawo yokuthenga izindlu kuzo zonke iintlobo zeentengiso zamaphepha-ndaba aphantsi.
Njengomthetho, iintengiso zearhente yokuthengiswa kweepropathi zihanjiswa ngosuku lwesibini okanye lwesithathu emva kokungeniswa kwazo, kwaye ukuba ufuna intengiso yakho yokuthengisa ipropathi ihlawulwe apho ngalo lonke ixesha, ngaphandle kwekhefu "lesidlo sasemini", kuyacetyiswa ukuba uhlawule kwangoko Iziphumo zokukhutshwa eziliqela. Ke unokuqiniseka ukuba umntu oza kuba ngumthengi wakho uya kuhlala ekwazi ukubona isindululo sakho sivula iphephandaba.
Ukuba sithetha ngobunewunewu bezindlu, Ke umthengi wakho - umntu okhuselweyo kwezemali. Akayifundi imitya engapheliyo ngokuprinta okuncinci, ekhangela ukhetho kuphela. Umthengi "onemali" ukhetha ukujonga iimagazini ezinamaxabiso aphezulu, esele zikhethe ezona ndlela zintle.
Inketho yesibini: Intengiso ye-intanethi yokuthengisa izindlu nomhlaba
Isizukulwana esidala sinamathandabuzo, kodwa iyavakala. Ngaphandle kwento yokuba iifoto zezindlu zentengiso zasimahla kwinethiwekhi ziyanda ngesandi sesandi, abantu bafunda intengiso kubo, kwaye bathenge iipropathi…
I-Intanethi, ukuba ndingatsho njalo, "uye ebantwini", kwaye akunakwenzeka ukuba ujongane nayo. Olona ncedo luphambili esinalo malunga nentengiso yearhente yokuthengisa izindlu kwi-Intanethi - sisantya sokubekwa. Iintengiso zeearhente zezindlu ziye zipapashwe, zihlala zikwimini enye, kwaye oku kubaluleke kakhulu ukuba ufuna ngokukhawuleza ukuthengisa ipropathi.
Kwakhona, akukho mfuneko yokuphuma endlwini, ukuhlawula intengiso kwiphephandaba, ulinde ushicilelo njalo njalo. I eyona ndlela kwabo bafuna njalo ezithengisa iipropathi mahala! Ngapha koko, intengiso yearhente yokuthengiswa kwezindlu ayilungelanga wena kuphela kodwa nomthengi ongenasidingo sokushiya intuthuzelo yekhaya lakhe okanye eofisini kwaye uya kuba nakho ukuqhelana nobume kunye neefoto zepropathi yendawo ethengisa izindlu nomhlaba kwaye akhethe ayithandayo Ukukhetha izindlu nomhlaba.
Kutshanje, abathengi abaninzi bafuna izindlu nomhlaba kwi-Intanethi, kwaye ke iyavakala indawo ukubeka iintengiso apha.
Ukuba ufuna ukubhengeza iipropathi simahla kwiarhente yesakhiwo sokwenyani kufuneka Landela eli khonkco:
Kwi-Intanethi kukho: izixhobo ezihlawulelwayo nezisimahla zentengiso yearhente. Kwangelo xesha, ukhetho lokugqibela alusekho ndlela imbi ngakumbi. Ukuba uthatha isigqibo sokufaka ifayile yentengiso yendawo yokuhlala kwi-Intanethi, khumbula ukuba ungachitha imali eninzi uchithekile. Ke cinga ngononophelo malunga nendawo kwaye kutheni uthathe isigqibo sokunika isibhengezo-ntengiso sakho.
Ukuqala ukukhuthaza kubalulekile ukuba uqonde kuqala ukuba yeyiphi iwebhusayithi eyaziwa kakhulu kwindawo yakho. Kwaye kuyinqweneleka ukubeka iintengiso zearhente zepropathi hayi kwisibonelelo esinye okanye ezibini kwi-intanethi, kwaye kungcono ubuncinci kwiziza ezili-15 ukuya kwezi-20. Okungakumbi -Ingcono!
Eli qela libonakaliswa kukugubungela okubanzi kwezinto ezahlukeneyo zabaphulaphuli ekujoliswe kubo kunye nendlela yokunxibelelana nayo, kunye namathuba ngamathuba ngendlela yokwazisa nokuhlaziya ulwazi.
Yeyakho iwebhusayithi ifuneka kuphela kwi-realtor ebeka iintengiso zepropathi kwi-intanethi. Umbuzo kukuba utyebile kwiimpawu kwaye ugcwele lwazi, ulwesibini. Ungayibhala apha: Ungeniso loSetyenziso loSimahla seDMOZ Indawo yamahala yeeWebhusayithi WWWi.co.uk
Inethiwekhi yoluntu kunye neeforamu kwintengiso yokuthengiswa kwezindlu nomhlaba simahla kwi-intanethi ibandakanya unxibelelwano olungekho sesikweni okanye utshintshiselwano lolwazi oluluncedo, kodwa kwidesika ethile inokusetyenziswa ukukhuthaza iipropathi ezithile. Sikwacebisa ukuba kusetyenziswe iipropathi zentengiso zakudala.Eyona mithetho iphambili:
Beka ukupapashwa kuphela kumaqela afanelekileyo nakuluntu
Ukuqhubeka ukhulisa isiseko sakho sobhaliso (abalandeli, abahlobo kunye nonxibelelwano)
Beka ulwazi olunomdla ngokwenene
Ubuninzi bokugcwalisa upapasho lwakho ngemigangatho esemgangathweni (iifoto kunye nevidiyo)
Hlala unyanisekile kwaye unethemba (ngenye indlela akukho mntu uya kujonga ecaleni lakho)
Kungenxa yoko i-realWW isetyenziselwa ukusasaza yonke intengiso engenisiweyo kwii-medias zentlalo ukuhambisa ukunyusa okuphezulu.
Ukuthumela i-imeyile kunye nentengiso yendawo yokuhlala kwi-Intanethi sisixhobo esihle, ukuba unaso isiseko sabathengi. Umthengi uyakugcina ngokukhawuleza umboniso ngendlela ye-elektroniki kunokugcina imveliso eprintiweyo. Ukongeza, ixesha kunye neendleko zemali ziphantsi kakhulu kwaye ukusebenza ngempumelelo kwesi siphathi sentengiso kuphindaphindeka amaxesha amaninzi ngenxa yeendleko ezisezantsi kunye nesantya sokusetyenziswa.
umboniso ntetho ayisiyiyo into umntu anokuthi ayibize ngentengiso epheleleyo yevidiyo, ukuthengisa kwayo kufuna izixhobo nezixhobo ezibalulekileyo kunye nexesha. Ke ngoko, sithetha nje malunga nengcaciso-iseti yeefoto ezinenkcazo emfutshane, ezithathelwa indawo ngamanqam kwimizuzwana emi-5 nangomculo ongasemva. Ifayile yevidiyo enesiphumo ingalayishwa ngokusingathwa kwevidiyo (youtube, vimeo) kwaye kamva idityaniswe kwiwebhusayithi yakho okanye inokudityaniswa kwiintengiso eziphathwayo.
Intengiso yomxholo kunye neebhanile kwintengiso yokuthengiswa kwezindlu nomhlaba kwi-intanethi yempembelelo ngqo kumthengi onokubakho. Xa uqhuba intengiso ye-PPC kufanelekile ukubiza iingcali, ngeli nqanaba sisixhobo esinzima kakhulu. Intengiso yesibhengezo ilula kakhulu, uluhlu lwazo oluqhelekileyo lokusetyenziswa zii-portals kunye neebhodi zemiyalezo.
Ukuba uziva ngathi uchitha ixesha elininzi ngokubeka intengiso yakho kwiibhodi zentengiso ezikwi-intanethi, kukho inani lezixhobo ezibonelela ngesisombululo esikhawulezileyo salo mbandela. Ngendlela, yenza umkhankaso wentengiso wakho. Ukuza kuthi ga ngoku, ngomrhumo omncinci, awukwazi ukonwabela ukubekwa ubuninzi bpropathi yakho kwiibhodi zemiyalezo ezahlukeneyo, kodwa kunye nokuthumela nge-imeyile kwi-intanethi isicatshulwa sakho sentengiso kubo bonke abathathi-nxaxheba kwimarike yearhente yokuthengisa izindlu: zabanye ababhalisile be-Intanethi, phakathi kwabo abanokuthi babe ngabathengi bepropathi yakho.
Indlela Yesithathu: “Abahlobo”
Inketho yokuthengisa iipropathi ngokuqhelanisa yenye yezona zilula kwaye zaziwa kakhulu. Inqaku lilula: qiniseka ukuba malunga nokuthengiswa kwepropathi yakho, baya kuva abantu abaninzi ngangokunokwenzeka.
Biza bonke abahlobo bakho, abathandekayo, abahlobo kunye noogxa! Uyenza njani? Thatha umnxeba, vula i-ICQ, Skype, kunye neeprofayili zenethiwekhi yakho yentlalo (i-Facebook, i-Twitter, njl.njl). Apho uza kubona izihlobo zakho, nganye nganye - engenabanxibelelani abangaphantsi kwakho ... Lowo ngumbono ophambili - ukuthengisa iipropathi kunye nabahlobo.
Mhlawumbi umhlobo wakho, okanye umhlobo womhlobo womfazi wakhe ujonge kanye le nto ufuna ukuyihlutha?! Hambisa ikhonkco kwiwebhusayithi enikezelwe kwipropathi yakho, okanye ileta enemibala enemifanekiso eqhotyoshelweyo! Apha, owona mthetho uphambili: ungayigqithisi kwaye ungabi "yimpukane ecaphukisayo," kwaye ngoncedo ucele uncedo.
Inketho yesine: Thenga intengiso yesibhengezo sesakhiwo
Olu khetho luya kuba lolona lungcono ukuba uthengisa indlu enexabiso eliphakamileyo, amagumbi aseVIP okanye enye into ebizayo. Le yimeko yomfanekiso omuhle, opeyintwe embindini wesixeko “ekutyibilikeni” okanye kwibhodi yedrafti nakwisibhengezo esikhangayo kwiphepha eliphambili leziza ezityelelwe kakuhle zinokunika isiphumo esifunekayo - ukuthengisa okukhawulezayo kunye nengeniso kwentengiso yokwenyani Indawo yokuhlala, kuphela ukuba:
Chaza ngokuchanekileyo umzobo womthengi
Uyikhethe ngempumelelo indawo yentengiso
Kwaye uchaze ngokufanelekileyo amaxabiso epropathi (awangaphezulu kwayo!) - Kungenjalo, nokuba uthengisa intengiso yendawo yakho kumabonwakude - awuzukufumana mbuyekezo
Njengoko ubona, ukurhweba ngokuthengisa izindlu kunetheko oluqinileyo!
Ukuze ufunde ngakumbi malunga nentengiso yexabiso lesibhengezo sesakhiwo kunye nceda nceda atyelele eli phepha
Inketho yesihlanu: isimahla yokuthenga izindlu nomhlaba intengiso kwiifestile
Ukuze siphumelele ekuthengiseni izindlu nomhlaba, kufuneka sisebenzise zonke iindlela ezikhoyo, ungaze wazi ukuba yeyiphi na loo ndlela, apho iya kuba yeyomnye umthengi wepropathi yakho! Kwaye enye yezi ndlela zentengiso - ifestile yendlu yakho.
Le ndlela ilula kwaye nangaphandle kwayo MAHHALA. Kwaye abo banamava ngale ndlela bathi iyasebenza !!! Ukongeza, ngokweenkcukacha-manani, uninzi lwabathengi bathenga iipropathi kwimimandla abahlala kuyo, abasebenza kuyo okanye abasebenza kuyo. Oku kuthetha ukuba umthengi wakho onokubakho unokuhamba nje phantsi kweefestile zakho kwaye akazi kwanto, ukuba nje awuthathi inyathelo.
Kwenziwe ntoni? Shicilela kuphela oonobumba abakhulu kumshicileli kwaye unamathisele kwifestile yefulethi ukuze intengiso ifundwe ngokukhululekileyo kwindlela yendlela okanye kwindlela yendlela.
Olona ncedo lukhulu kule ndlela luzisa iiphowusta ezijonge iifestile ezijonge kwisitrato zinabantu abaninzi.
Inketho yesithandathu: ukuphindaphinda kuphumelele
Ukuthumela iintengiso ngaphandle- lelinye ithuba lokuthi "umhlaba" ukuba uthengisa iipropathi. Ingakumbi ukuba iipropathi zakho ziphakathi okanye zinexabiso eliphantsi.
Unokuncamathisela iintengiso kwiindawo zokumisa iibhasi (kukho ukuhamba kwabantu abaninzi), kunye nokubeka iintengiso zearhente kwiibhodi zezaziso, ezikufuphi nokungena kwezindlu. Emva kwayo yonke loo nto, abamelwane bakho endlwini basenokuba ngabathengi bepropathi yakho. Abamelwane kwakhona banezihlobo, umzekelo, abazali okanye abantwana, okanye nabani na ofuna ukusondela kubo, kwaye ke banokuba nomdla kwipropathi yakho. Ekugqibeleni, banabahlobo… Ke ungoyiki ukubeka iintengiso kufutshane nendlu!
Kodwa musa ukuxhaphaza umonde wabamelwane kwaye unamathisele i-ads yearhente ngqo kumnyango wokungena okanye kwizitepsi, kodwa iibhodi ezisegcekeni okanye kufutshane neendawo ezixhaphakileyo (kwiindawo zokumisa izithuthi, izibonda kunye neebhodi zebhulethini kufutshane nevenkile enkulu) - yile nto kanye udinga umyalezo wakho.
Uninzi lwabantu lukholelwa ukuba olu hlobo lwentengiso yearhente yasimahla ayisebenzi. Eyona nto iphambili apha ngumthamo. Ukuba uthathe isigqibo sokuba ikhulu leentengiso ezidlulileyo-kuninzi, ke, yeha, uya kuphoxeka! Kungenxa yokuba i-avareji yale "miyalezo" iphila kuphela sisiqingatha semini, ngamanye amaxesha lixesha elincinci. Baqwengwe ngabatshisi, abantu abakhuphisana nabo, abagula ngengqondo, kunye nabathengi abanomdla. Ke ngoko, yonke imihla emi-2-3 iyimfuneko glue kwiintengiso ezintsha ukubuyisela ezikrwitshiweyo nezonakeleyo.
Le ndlela yentengiso iyamkeleka ukuba ukulungele ukuncamathisela iintengiso ezingaphezu kwewaka. Kwaye ngenxa yokuba lo msebenzi ungawona unomdla kakhulu, kwaye kuthatha ixesha elininzi, sikucebisa ukuba uqeshe umntu.
Inketho yesixhenxe: jonga abancedisi
Ukuba uthengisa ipropathi ngaphandle kwabalamli- hayi isiphelo ngokwayo, ke, njengendlela eyongezelelweyo yentengiso, usebenzisa iiarhente zentengiso yearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba.
Ukutsala iiarhente ezilishumi elinambini, kwaye unikezele ukuthengisa ipropati yakho - hayi isigqibo esibi. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, iinkampani ezininzi zepropathi yokuthengiswa kwezindlu ziye zafumana ukuthembeka, kwaye namhlanje, abathengi abaninzi abachithi xesha bephosa iitoni zemithombo yeendaba kukhangelo lwepropathi bayithandayo, kodwa babhekise kwiarhente kwaye bathathe impahla yabo.
Ke ngoko, musa ukukutyeshela ukurhoxiswa kweearhente zeearhente zepropathi-oku kukwayenye yezona ndlela zisebenzayo zokuthengisa izindlu nomhlaba.
Eyona ndlela ilungileyo kwabo bafuna ukubhengeza iipropathi zasimahla simahla! Ukongeza, intengiso yearhente yokuthengiswa kwezakhiwo nomhlaba kwi-Intanethi ayilungele wena kuphela kodwa kodwa nayo
okwenyaniWW Julayi 6, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Yenza intengiso yeArhente yeZindlu simahla, Yenza intengiso yearhente yasimahla, Intengiso kwi-Intanethi yeNtengiso yePropathi, Iintengiso zeearhente ezifanelekileyo, Isimahla yeNtengiso yeArhente, Iintengiso zasimahla zentengiso yearhente, Izibhengezo zentengiso zasimahla, Intengiso yasimahla yeNtengiso yePropathi, Intengiso yasimahla yama Realtors, Intengiso yasimahla yeNtengiso yePropathi, Intengiso yasimahla yeZakhiwo zeHlabathi, Intengiso yasimahla yeZindlu kwi-Intanethi, Intengiso zasimahla zePropathi, Intengiso yasimahla yePropathi, Intengiso yasimahla yePropathi, Intengiso yeZindlu eziSimahla, Intengiso zasimahla zeNdawo, Izibhengezo zentengiso zasimahla kwi-Intanethi, Intengiso yasimahla yeZindlu, Intengiso yasimahla yeZindlu, Intengiso yasimahla yeZindlu kwi-Intanethi, Intengiso yasimahla yeZindlu kwi-Intanethi, Intengiso yeNtengiso yePropathi simahla, Intengiso zeNtengiso yeZindlu zeHlabathi, Intengiso yeArhente yeNtengiso yeHlabathi, Intengiso yeNtengiso ye-Intanethi, Thumela iiNtengiso zasimahla zeZindlu, Thumela iiNtengiso zasimahla zePropathi, Thumela iiNtengiso zeZindlu zeZindlu simahla, Intengiso yePropathi yasimahla, Inethiwekhi yeNtengiso yeNtengiso, Intengiso yeNtengiso yeZindlu simahla, Inethiwekhi yokuthengisa intengiso yearhente, Izakhiwo zentengiso zasimahla, Iintengiso zentengiso zasimahla, Ukuthengiswa kwezindlu simahla. Bookmark le Permalink.